कोरोनाको हलचल र आगामी विश्व – Sthaniya Patra
By स्थानीय पत्र	 On Apr 21, 2020
महामारी सुनेपछि कस्को मन खुसी हुन्छ र ? हो त्यही महामारीबाट अहिले नेपाल मात्रै हैन पुरा विश्व गुर्जिरहेको छ । सर्वप्रथम चिनमा देखा परेको कोरोना आज सम्म विश्वमा २१० देशमा फैलिसकेको छ । अझुसम्म विश्वमा सवैभन्दा बढी अमेरिकामा मान्छेहरुको ज्यान गएको छ । चिनमा पंक्षीबाट मानिसमा सरेको अनुमान गरिइएको कोरोना भाईरस अहिले विश्वलाई नै तेस्रो विश्व युद्धको रुपमा चुनौति दिइरहेको छ । शक्तिशाली भनिएका देशहरु घुडा टेकिसकेको अवस्था छ । विश्वको आर्थिक अवस्था धेरै नै खराब हुने अवस्था आउन सक्ने अर्थविदहरुले भनिरहेका छन् ।
आज सम्म कुनै पनि महामारी आउदा प्रायः बस्तीमा भएको छानोको घरमा बढी अक्रान्त गर्ने गर्दथ्यो तर कोरोना भाईरसले आकाशमा उडने अपर क्लास भनिने व्यक्तिहरुलाई बढी अक्रान्त पारेको छ । कहिले नचिपल्ने न्युयोर्क आज महामारीको कारण चिप्लेको छ । न्युयोर्कका मलहरु,गगनचुम्बी भवन हरु रोईरहेका छन। ब्रिटेनको दरबार र स्पेनको दरबारमा समेत कोरोना भाईरस पुगेको छ । रोम कोरोनाले गर्दा जलिरहेको छ ।
किन बुहान देखि न्युयोर्क जलाउने भाईरस को उत्पति हुन्छ रु तिनको अर्थराजनितिक कारण धेरैले वातावरणीय विनास संग लगेर जोडेका छन् । नेपालकै अनुसन्धानकर्ता उत्तमबाबु श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ “मान्छे स्वस्थ हुन पृथ्वी स्वस्थ हुनुपर्दछ” । यसैगरी क्यानेडियाली लेखिका नोयमी क्लेन भन्छिन् “कोरोनाको सम्बन्ध पुँजीवादसँग छ”। पुँजीवादलाई व्यापार चाहिएको छ । मुनाफा चाहिएको छ। प्रकृतिको दोहन भएको छ । फलतः प्रकृति अस्वस्थ र असन्तुलित भएको छ । तर ट्रम्पले कोरोना भाईरसलाई चाइनिज भाइरसको उपमा दिएका छन् । महान विचारक युवल हरारी भन्दछन “हामी सबै मर्दैनौ , केही मात्रै मर्दछन् हामी बाँच्दछौ । कोरोनाको महामारी पश्चात विश्वमा विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन हुनेछ ।”
आजको समयसम्म आईपुग्दा पश्चिमा देशहरु अमेरिका,इटाली,स्पेन,ब्राजिल,जर्मनीमा बढी कोरोना भाईरसले आक्रान्त पारेको देखिन्छ ।यसै गरी पुर्वी एसियामा अझ खासै प्रभाव पारेको छैन् । विभिन्न संघ संस्थाहरुको प्रक्षेपण अनुसार यदि भारतमा कोरोना भाईरसले आक्रान्त पार्यो भने तीसौ लाख मान्छेहरु मर्न सक्छन् भन्ने जनाएको छ । कोरोना महामारीले विट्रेनका प्रधानमन्त्री वोरिस जोनसनलाई समेत छोडेन । दिनहुँ हजारौको संख्यामा कोरोनाबाट मर्ने क्रम चलिनैरहेको छ । कोरोना भाईरस विरुद्धको खोप वनाउन अनुसंन्धानकर्ताहरु अनवरत रुपमा लागि परेका छन तर सफल भईरहेका छैनन्।
वर्तमान समयमा विश्वमा भयको अस्वस्था पैदा भएको छ , के हामी बाँचिएला कि मरिएला भनेर ।मान्छेहरुले बल्ल बुझन थालेका छन पँुजीवाद के हो भनेर । विभिन्न विदानहरु तर्क गर्छन कोरोना भाईरस पँुजीवादको देन हो । विभिन्न प्रश्नहरु उत्पन्न हुन्छन, के पश्चिमेली विकासको मोडेल असफल भएकै हो त रु के पुजीवाद माथि सोच्नु पर्ने बेला आएकै हो त रुजस्ता अरु पनि प्रश्नहरु उब्जिन्छन् ।यो माहामारीले के संकेत गर्दछ भने अब युद्धको प्रतिस्पध्र्राबाट स्वास्थ्य क्षेत्रकोे प्रतिस्पध्र्रामा जानुपर्दछ ।
कस्तो होला कोभिड १९ प्रकोप पछिको विश्व ?
कोरोना प्रकोप पछि विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्नेवाला छ । विश्वको राजनिति देखि आर्थिक क्षेत्रको समीकरण परिर्वतन हुन सक्छ । भारतका चर्चित आर्थिक योजनाविद,लेखक,उत्प्रेरक डा विवेक विन्द्रा का अनुसार विश्वमा लगभग करोडौको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपालमै हेर्ने हो भने कोरोना पछि लाखौ व्यक्त्तिहरु विदेशबाट रोजगारी गुमेपछि नेपाल आउन सक्छन र नेपालको रेमिट्यान्समा गिरावट आउने छ । देशमाथि आर्थिक चाप वढनेछ । देशको समाजिक, आर्थिक बनोटमा परिर्वतन हुनसक्छ र नेपालमा वेरोजगारी बढनेछ ।
विश्वको सांस्कृतिक बनौट परिवर्तन हुनेछ । हिन्दु धर्मले सिकाएको नमस्कार गर्नु, बाहिरबाट आएपछि सावुन र पानीले हात धुनु जस्ता कार्यहरु गर्नु मानिसहरुको दिनचर्या बन्नेछ । अब सरकारहरुले रगत मासुको मान्छे भन्दा बढी शक्तिशाली सेन्सर र अलगोरिदममा विश्वास गर्न सक्दछन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले हालसालै इजरायली सुरक्षा निकायमा नुहाईरहेको आंतकवादी देखि कोभिड १९ को बिरामी सम्मलाई निगरानी गर्न सकिने गरी निगरानी प्रविधिको आधिकारिक प्रयोगको प्रारम्भ गरे । सरकार र कर्पोरेसनहरुले मानिसको ट्रयाक ,मोनिटरिङ र मेनुपुलेसनमा प्रविधिहरुको प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । यी कार्यहरु सरकारहरुले पछि सम्म पनि यस्ता कार्यहरुको प्रयोग गरेर मानिसहरुको व्यक्तिगत अधिकारलाई वेवास्ता गर्न सक्दछन् । यति सम्म कि तपाईले आफनो स्मार्टफोनमा औलाले छुने वितिकै तपाईले के चाहेको हो भन्ने कुरा सरकारले थाहा पाउन सक्छ । निगरानी प्रविधिमा बिकास हुनेछ साथै अस्पतालहरुमा नर्सहरुको साटोमा रोवोटहरुको प्रयोग र निगरानी तथा औषधी ढुवानीको लागि ड्रोनहरु वढी मात्रा प्रयोग हुनेछन् ।
विश्व तापमानमा उल्लेख्य सुधार हुनेछ । मान्छेहरुलाई कृत्रिमरुपी भन्दा प्रकृतिरुपी वातावरणमा रमाउने मानसिकताको विकास हुन सक्दछ । मान्छेहरुको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत पार्ने विभिन्न अनुसन्धान हुनेछन् । आयुर्वेदको झन महत्व बढन सक्छ । कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढ्नेछ र सवै देशहरुले आफ्ना नागरिक प्रतिको स्वास्थ्यमा जिम्मेवार बन्नेछन् । विश्वव्यापीकरणको महत्व झन बढेर जानेछ । विश्वको नेतृत्वकर्ताको पनि परिवर्तन कोभिड १९ ले गराउन सक्छ कि भन्ने अनुमान राजनितिज्ञहरुले लगाइरहेका छन् ।
कोभिड १९ बाट मुक्ति पाउन एउटा छनौटको आधार हामी सामु पैदा भएको छ एक्लै लडने कि सहकार्य वा सामुहिकतामा जाने । एक्लै लडयौ भने हामी सबै सखाप हुनेछौ , तसर्थ हामीले सहकार्यमा जानुपर्दछ र मानवको अस्तित्व जोगाउनुपर्दछ ।
जिल्ला नवलपरासी प्रतापपूर गा. पा. वार्ड न ९ घर भएका लेखक राजनितिक विश्लेषक तथा लेखक हुन ।
कार्यान्वयन भएनन् सर्वोच्चका १९१ आदेश